कस–कसलाई मनपर्छ पानीपुरी र चटपटे ? यस्तो अखाद्य खानेकुराबाट सावधान हुनुहोस् ! – Everest Dainik – News from Nepal
कस–कसलाई मनपर्छ पानीपुरी र चटपटे ? यस्तो अखाद्य खानेकुराबाट सावधान हुनुहोस् !
स्ट्रिट फुडको नाम लिने बित्तिकै धेरैजसोले पानीपुरी र चटपटे सम्झिन्छन् । अमिलो–पिरो खान मन पराउनेका लागि यी खाद्यपदार्थ रोजाइमा पर्छन् ।
विशेषगरी, युवतीमाझ पानीपुरी र चटपटे लोकप्रिय छ । कतिपयले खाजाका लागि खान्छन् भने कतिले स्वादका लागि मात्र । पानीपुरी र चटपटे संस्कृति भारतबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा यो नेपालमा समेत व्यावसायिकरूपमै अघि बढेको छ । साथै, यी पदार्थ एसियाका अन्य केही देशमा समेत खाने गरिन्छ ।
स्वस्थकर खाद्यपदार्थ समावेश गरेर सफा गरी बनाइएको पानीपुरी–चटपटे स्वास्थ्यका लागि राम्रै मानिन्छ । तर, बाटोमा जताततै पाइने यी चिज स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
अब जानौँ, कस्तो पानीपुरी र चटपटे अखाद्य हो ?
यस्ता छन् स्वास्थ्यमा पर्ने केही असरहरु
(अमिलो बनाउने नाममा यदाकदा पानीपुरीमा एसिड र अन्य रसायनजन्य अखाद्यपदार्थसमेत मिसाइएको पाइन्छ ।
(पानीपुरी र चटपटे खुला रूपमा बाटोमै बेचिने हुँदा धुलो–धुवाँजस्ता बाहिरी प्रदूषणयुक्त पदार्थसमेत खानेकुरामा परिरहेको हुन्छ ।
(कुन पानीपुरी वा चटपटे खानयोग्य छरछैन भन्ने बनाउने मान्छेको स्वास्थ्य र सरसफाइमा समेत भर पर्ने गर्छ । बनाउन प्रयोग गर्ने रुमाल, कागज, पानी, भाँडा आदि सफा हुनु अनिवार्य छ । साथै, हात नधोईकन वा अन्य बाहिरी वस्तुको सम्पर्कमा आएर सीधै पानीपुरी वा चटपटे बनाएको हुनुहुँदैन ।
(बनाउँदा सधैँ पन्जा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । यसले केही हदसम्म सफा बनाउन मद्दत गर्छ । बनाउन प्रयोग गरिने चिजहरू जस्तै– पानी, पुरी, उसिनेको आलु आदि बासी हुनुहुँदैन । एजेन्सीको सहयोगबाट